HIM | Health in Myanmar » 2011 » December
Even more on creative use of HIV tests in the military
From an anonymous reader. Even more on this …
ဆွေးနွေးစုံစမ်းနိုင်သော၊ သွေးစစ်နိုင်သော လိပ်စာနဲ့ ဖုန်းနံပါတ်များ
ပြည်နှင့် အခြားဒေသများရှိ HIV/AIDS နှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးစုံစမ်းနိုင်သော၊ သွေးစစ်နိုင်သော လိပ်စာနဲ့ ဖုန်းနံပါတ်များ ဖြစ်ပါတယ်..
Background on the creative use of HIV test results by people in the military
Thanks to an anonymous reader who provided this background on the use of HIV test results inacreative fashion by people in the military.
The beginning of the end of UNAIDS?
What audience is this video produced for?
ရန်ကုန်ရှိ မေးမြန်းဆွေးနွေးနိုင်သော၊ သွေးစစ်နိုင်သော လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များ
Author: HimBur | Category: Myanmar, News2 comments
ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ HIV/AIDS နဲ့ ပတ်သက်၍ မေးမြန်းဆွေးနွေးနိုင်သော၊ သွေးစစ်နိုင်သော လိပ်စာများနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များဖြစ်ပါတယ်……
Black Diamond ဆေး နဲ့ STDs ရှိ-မရှိ သွေးစစ်ခြင်း
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmar, Newsno comments
ကျွန်တော်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေတာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်က အလုပ်လိုက်လျှောက်ရင်းနဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ အင်တာဗျူး ဝင်ရပါတယ်။ အဲဒီလုပ်ငန်းမှာ အင်တာဗျူးအောင်ပြီး သူတို့က ဆေးစစ်ပါတယ်။ ဆေးစစ်တာက (၅)မျိုးစစ်ပါတယ်။ (၁) ကာလသားရောဂါ၊ (၂) HIV၊ (၃) B ပိုး၊ (၄) C ပိုး၊ (၅) X-Ray ရိုက်တာပါ။
သမီး အရမ်းစိတ်ညစ်တယ်ဆရာ။ သမီး အပျိုမစစ်တော့ဘူးပေါ့နော်။ သမီး ရောဂါတွေ ဘာတွေ ရမှာလည်း ကြောက်တယ် ဆရာ။ အခု နေရင်းထိုင်ရင်းတောင် HIV ပိုးများ ၀င်နေသလားဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လန့်နေမိတယ်။ သုတ်ရည်မ၀င်ပေမယ့် oral sex လုပ်ရင်လည်း ရောဂါကူးတယ် မဟုတ်လား ဆရာ။
Creative idea to avoid danger
Whether this story is true or not, it is certainlyacreative idea.
အမေးအဖြေ Dec, 2011(3) (၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ)
အိမ်ထောင်ဖက်နှင့် အတူတူနေပြီးလျှင်လည်း တခါတခါမှာ သွေးများဆင်းတတ်ပါသည်ရှင့်။ (အမြဲတမ်းတော့ မဟုတ်ပါ) ရာသီလာပြီးသွားလျှင်လည်း ရက်ပြန်မရောက်သေးဘဲ ရာသီသွေးများ ၁ ရက် ၂ ရက် ဆက်တိုက်ဆိုသလို ပြန်၍ ဆင်းတတ်ပါသည်။
Three comments on recent postings
The [him] moderator has received three comments on recent postings. One criticises CNN, another the disgruntled former employee, andathird the Global Fund. Please consider them.
HIV issues at the Mae Tao Clinic
The [him] moderator wonders how “HIV is still one of the big challenges because of the population mobility and vulnerability and economic opportunity, especially for Burma”. How exactly does population mobility and economic opportunity contribute to an HIV epidemic?
Although Dr Cynthia says that HIV prevalence among pregnant women is increasing, an increase in positivity rate is almost certainly an artefact of who is being tested. Pregnant women antenatal clinic attendees are not, and never have been,avalid proxy for the general population.
နားနဲ့မနာ ဖဝါးနဲ့နာပါဆရာ။ ကျွန်မ အသက်က (၂၅) နှစ်ရှိပါပြီ။ ၂၂-၁ဝ-၂ဝ၁၁ နေ့က ကျွန်မရဲ့ Menstruation နောက်ဆုံး လာတဲ့နေ့ပါ။ ၂၉-၁ဝ-၂ဝ၁၁ နေ့ကျတော့ အမျိုးသားနဲ့ အတူနေဖြစ်ပါတယ်။ ရက်ရှောင်နည်းအရ နေလိုက်တာပါ။ လွတ်မယ်လည်း ထင်မိတာပါ။